Dawlada Fadaraalka oo digniin adag udirtay Ganacsatada lacagta siisa Alshabaab – Idil News
September 21, 2020 | Madaxa WFP oo Puntkabd gaaray
Dawlada Fadaraalka oo digniin adag udirtay Ganacsatada lacagta siisa Alshabaab
Posted By: Idil News Staff July 22, 2017
Wasiir Ducaale ayaa xusay in ay dambi tahay nooca kasta oo taageero la siinayo kooxda Alshabaab sida ganacsi, siyaasad, qarinta, la xiriirka, niyad u dhisid iyo wixii lamid ah la joojiyay cidii lagu helo ay dambiile u aqoonsan doonto dowladda Soomaaliya.
“Tallaabo sharci ah ayaa laga qaadi doonaa cidii u aqoosata Alshabaab maamul jira,mana jiro cid xukun u aadi karta waxaan ognahay in xukun maxkamadeed loo aado Toorotoorow,Bariire iyo meelo kale,”ayuu yiri wasiirka Amniga dowlada federalka Soomaaliya.
Sidoo kale dowlada ayaa sheegtay inay ka mamnuucday hay’adaha isgaarsiinta inay lacago u xawilaan ururka Alshabaab isla markaana Bangiyada aysan dhigin karin Alshabaab.Amaradan uu sheegay wasiirka amniga ayuu ku tilmaamay inay yihiin go’aano ay gaareen golaha wasiirada.
aliyaha hey’adda nabad sugidda iyo sirdoonka Qaranka C/laahi Maxamed Cali Sanbaloolshe, ayaa dhankiisa sheegay in dhaqaale kala duwan ay Al-shabaab hesho kuwaasoo loogu yeero magacyo kala duwan, sida taakuleyn, Zakawaad, ganaax iyo qaar kale ayna dhamaantood yihiin mamnuuc.
Waxaa kale oo uu intaa ku daray iney hayaan liiska ganacsato iyo shirkado si toos ah iyo si dadban lacag u siiyo Al-shabaab wuxuuna xusay in hadda ka dib aan loo dulqaadan doonin.
Qodobada caawa ka soo baxay laamaha amaanka ayaa waxay kala yihiin sidan:-
1-In aan la aqbali doonin in lacago la siyo Alshabaab taasi oo ay ugu yeeraan taakuleynta iyo sakawaad.
2- Cid kasta oo alshabaab lacag siiso in talaabo laga qaado,lamina aqbalayo in mar marsiyo laga dhigto handadaad
3-Ganacsatadu waxaa looga digayaa in ay taageeraan Alshabaab oo ay lacago siyaan.
4-Cidii Al-shabaab u aqoonsata maamul jira talaabo ayaa laga qaadayaa.
5-Xawaaladaha dalka ka jira Alshabaab lacago uma keydin karaan, lacagna uma diri karaan.
6-shirkadaha Isgaarsiinta uma fududeyn karaan adeegyada kala duwan ee isgaarsiinta.
7-Caawa laga bilaabo ninkii ganacsade ah oo aado deegaano Al-Shabaab maamulaan sida Tooratoorow iyo deegaano kale lacagna u geeya waa xabsi, hantidiisana Dowladda ayaa la wareegaysa.
8-Cid kasta oo go’aamadan ka hortimaada talaabo ayaa laga qaadayaa, cid looga aaba yeelaayana ma jirto.